Puntland Oo ka qeyb galaysa shirka caafimaadka Soomaaliya oo ka dhacaya Uganda (Dhegeyso) – Radio Daljir
Luulyo 20, 2013 5:16 b 0
Galkacayo, July 20- 2013 – Magaalada Galkacayo ee xaruunta gobolka Mudug maanta waxaa ka dhoofay wefdi ka socda wasaarada caafimaadka ee Puntland, kuwaasi oo magaalada Kampala ee xaruunta Uganda uga qeyb gelaya shir looga hadlayo caafimaadka Soomaaliya.
Wefdiga ka socda Puntland ee ka qeyb galaya shirka magaalada Kampala ka dhacaya ayaa waxaa ay ka kooban yihiin koox dhakhaatiir ah oo ka socda wasaarada caafimaadka, waxaana shirkaasi oo socon doona dhowr maalmood ay ku soo bandhigi doonaan doorkooda caafimaadka Soomaaliya.
Shirka looga hadlayo caafimaadka Soomaaliya ee ka dhacaya magaalada Kampala, waxaa lagu jaan-goynayaa qorshaha lagula tacaalayo labbada sano ee socotoa xanuunada TB-da, AID?s-ka iyo xanuunka Malaria-da, sida uu daljir u sheegay Dr, Cabdikariin xuseen.
Agaasimaha qeybta Malaria-da ee wasaarada caafimaadka ee Puntland Dr. Cabdikariin Xuseen Xasan oo la hadlay Radio Daljir ka hor inta aysan ka duulin Galkacayo, wuxuu sheegay in shirkaasi uu yahay mid ay ka qeyb gelayaan masuuliyiin ka kala socda wasaarada caafimaadka Federaalka, iyo kuwa kale oo ka socda Puntland iyo Soomaaliland.
Waftigaan Puntland ee shirkaasi ka qaybgalaya, uuna hoggaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland, waxaa ka mid ah agaasimayaasha waaxaha caafimaadka ee wasaaradda sida TB-da, Malaria, qorshaynta iyo sidoo kale agaasimaha hay’adda qaabilsan AID’s-ka Puntland PAC.
Halkan ka dhegeyso hadalka Agaasimaha qeybta Malaria-da ee wasaarada caafimaadka Puntland